Google Play တွင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Google Play တွင်ထိပ်တန်း 10 ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ
Google မှာထိပ်တန်း 10 ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ APK ကို Play
သငျသညျအစဉျအမွဲက hard သင်သည်အလုပ်လုပ်ခရီးသည်နေကြသည်အထူးသဖြင့်အခါ, နေရာတိုင်းကုရ်အာန်သယ်ဆောင်ရန်ကိုတွေ့ဖူးသလား သင်တစ်ဦး Android ဖုန်းရှိပါက, သင်ရိုးရှင်းစွာ Google Play တွင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဥပုသ်လ၏လသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးကုရ်အာန် app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ, ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်တကယ်နေရာလေးကိုလာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာနေ့တိုင်းကုရ်အာန်ရွတ်ဆိုရန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး app ကို download လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်လျှောက်တွင်တဦးတည်းသယ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲဘယ်နေရာကနေမဆိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရှုဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကို Android နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာဖတ်ရှုဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် app များကိုတချို့ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပိုမိုလွယ်ကူသငျသညျကိုအကောင်းဆုံးတဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။
ဤရွေ့ကား apps များပင်ကုရ်အာန်ရွတ်ဆိုစတင်ချင်သူအရင်ကဆိုရင်နှင့် Hafiz အီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့တူသီးခြားလိုအပ်ချက်များရှိသည်သောသူမြားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အများစုအတွက်အလွန်အလိုလိုသိနှင့်လွင်ပြင် interface ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်နှင့်အတူအလွန်အဆင်ပြေသောတဦးတည်းဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်သည်။
ဤတွင် Google Play တွင်ရရှိနိုင်ထိပ်တန်း 10 ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပများ၏စာရင်းဖြစ်ပါတယ်
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုရမ်ကျမ်း / ကုရ်အာန်စကားလုံး-to-စကားလုံးအင်္ဂလိပ်ငွေပေးငွေယူနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်လည်းမရှိ, ကန့်သတ်နှင့်အတူ mp3 အသံ murattal, 30 Juz သို့မဟုတ်ကုရ်အာန် 114 စူရဟ်ထောက်ခံပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအ Juz သို့မဟုတ်စူရဟ်သွားမျက်နှာပြင်လျှော။ သငျသညျရှုခင်းသို့မဟုတ်ပုံတူ mode မှာကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖတ်နိုင်တဲ့တိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဘက်ထရီချွေတာရန်ဒီ app လည်းမှောင်မိုက် themes များပါရှိပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်း, ခေတ္တနား play ပြန်လုပ်, နက်ဖြန်သို့မဟုတ်ယခင်ကျမ်းပိုဒ်မှပြောင်းနိုင်သည်။ ဘာသာပြန် Tafsir al-Jalalayn နှင့် Saheeh အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းကယ်တင်ကူးယူနှင့်ကျမ်းပိုဒ် bookmark နှင့်ပင်နောက်ဆုံးဖတ်သူတို့ကိုအထိမ်းအမှတ်နိုင်ပါတယ်။
Quran.com ကတည်ဆောက်, Android အတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဘာသာစကားများ 32 မှအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များနှင့်လည်းဘာသာပြန်ချက်သုံးပြီးခုန် options နဲ့ရှာဖွေမှုများကိုညဉ့်အခါ mode ကိုချောမွေ့စာဖတ်ခြင်း interface ကို, အညွှန်းတူသောအပေါငျးတို့သအံ့သြဖွယ် features တွေပါရှိပါတယ်။
ဤအင်္ဂါရပ်များကိုအချို့ကြောင့် Android အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် app ကိုလုပ်ဖြစ်ကြသည်။ Android အတွက်ကုရ်အာန်ကိုသွင်းယူပြီးနောက်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အော့ဖ်လိုင်းရွတ်ဆိုအချို့အရေးကြီးသောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။
အယ်လ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ကမ္ဘာတစ်လွှားကလူသန်းပေါင်းများစွာကအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ပေးသည်။ သင်တို့သည်လည်းသန့်ရှင်းသောအကျမ်းပိုဒ် bookmark နဲ့ "ကျွန်မအနှစ်သက်ဆုံး" အပိုင်းသူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
အယ်လ်ကုရ်အာန်သင်တို့ကိုလည်းစာသားနဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၏စတိုင်နှင့်သင်ရွတ်ဆိုလိုတဲ့လမ်း personalize မှခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျလညျး, ချဲ့ယင်းစာလုံးအရွယ်အစားကိုပြောင်းနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစာသားဖတ်နိုင်သည်။
နာမတျောအအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအော့ဖ်လိုင်း Read သငျသညျဆိုလိုသည်မှာနောက်ထပ်ဖိုင်တွေကို download လုပ်ပါရန်မလိုဘဲ, သင့်မှာ Android တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအော့ဖ်လိုင်းပေါ်တပြင်လုံးကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရွတ်ဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။
app ကိုအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတွက် 35MB ကြောင့်ဒီ app ကိုတခါမှာဤဖိုင်များကိုနှင့်အတူဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်ပါသည်။ ဒါကွောငျ့သငျသညျသွားလာရင်းကုရ်အာန်ဝင်ရောက်ဖို့အွန်လိုင်းသွားကြဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
သင်က Surah နှင့်မြေတပြင်လုံး၏ကျမ်းပိုဒ်နားထောင်နိုင်သည် MP3 အတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ဒီ app တွေနဲ့ format နဲ့။ တောင်မှပိုကောင်း, သင်တောင်မှဒီ app ကိုနားထောင်ရန်သင့်မိုဘိုင်းဒေတာကိုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒါဟာကနေရှေးခယျြဖို့ဦးဆောင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရွတ်ဆို၏ 100s ကျော်ရှိပါတယ်။ သငျသညျနားထောငျဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးရွတ်ဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအရည်အသွေးမြင့်အသံပေးပါသည်နှငျ့သငျကိုလည်း app ထဲမှာစူရဟ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
အယ်လ်ကုရ်အာန် ul-Kareem - ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်
ရုံစာဖတ်ခြင်းကုရ်အာန်ကိုအော့ဖ်လိုင်းတူ, အယ်လ်ကုရ်အာန် ul-Kareem အပိုဆောင်းဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီ app ကိုယျနှိုတစ်ခုလုံးကိုကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ပါရှိသည်။ သင်ရုံဒီ app ကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်။
ဒီ app ကို install လုပ်ပါပြီးနောက်, သင်သည်မည်သည့်နောက်ထပ်အွန်လိုင်းမယ်မပါဘဲတပြင်လုံးကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့စာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်၎င်း၏ရိုးရှင်းသော user interface ကိုအလွန်ဖတ်လို့လွယ်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုသည်အတိုင်း, ဒူဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အတူကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် သငျသညျအလွန်လွယ်ကူစွာဒူဘာသာပြန်ချက်ဝင်ရောက်ဖို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ဒူအတွက်ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ကိုနားထောင်သို့မဟုတ်တူညီသောဘာသာစကားတွင်ဖတ်ရှုဖို့ပိုနှစ်သက်သူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဒူဘာသာပြန်ချက်နားထောင်ခြင်းနှင့်အတူသင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောတရုတ်, ဒတျချြ, ပြင်သစ်, ရှအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအခြားဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောအဆိုပါကျမ်းပိုဒ်နားထောင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သာအဒူဘာသာစကားကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ဒါကွောငျ့ဒီ app ကိုသူ့ဟာသူအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
အယ်လ်ကုရ်အာန် MP3 - ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်စာဖတ်ခြင်း
အယ်လ်ကုရ်အာန် MP3 ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ပါနှင့်အလွတ်ကျက်ဖို့အကောင်းဆုံး-တော်ပါတယ် App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အသံဗားရှင်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရှု app ကိုအချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုအဲဒါကိုနားထောင်ဖို့စုံလင်သည်။
သငျသညျအပြည့်အဝအသံဖိုင်ရွတ်ဆိုထားသော, Transliteration နှင့်တပြင်လုံးကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ဘာသာပြန်ချက်ရနိုင်တယ်။ သငျသညျကျိန်းသေဒီ app တွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာ၏အသိပညာတိုးတက်စေရန်နှင့်မည်သူမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်မလိုဘဲဘာသာတရားအကြောင်းသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန် (စာမျက်နှာနှုန်း 16 Lines)
ကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန် app ကိုပြီးသားမြေတပြင်လုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်ပါနှင့်မှတ်မိကြသူမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, ဆိုလိုသည်မှာ Hafiz အီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စာမျက်နှာတိုင်းကသာတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အ 16 လိုင်းများပြသနိုင်အောင်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကုရ်အာန်မှတ်မိကြရင်တောင်ဒီ app နေရာလေးကိုလာပါတယ်။
နှင့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာပါ app ကိုသင်လုပ်ဖို့အားလုံးအခြေခံနှင့်အတူကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ရွတ်ဆိုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကုရ်အာန်ရွတ်ဆိုဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့အတွေ့အကြုံရှိဆရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့စံပြဖြစ်ပါတယ်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာပါ, ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူသင်ယူဖို့အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ App ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့အသီးအသီးအဘို့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူ Android အတွက်အကောင်းဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် apps စာရင်းကိုကြိုက်ခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ဆဲဒုက္ခကိုအကောင်းဆုံးတဦးတည်းကိုရှေးခယျြပွီးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သင်ကူညီပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာအကောင်းဆုံး app ကိုရွေးချယ်ဖို့သငျသညျကိုလမျးညှနျနိုငျသညျ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့သညျဤစာရင်းတွင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုအရေးကြီးသော app ကိုလွဲချော်သည်ဟုထင်ပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ကျနော်တို့ကပြန်လည်ဆန်းစစ်နှင့်ဤစာရင်းတွင် Google Play ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ add ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Aya - quran ...
အကောင်းဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ Android အတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Apps ကပ